Fanohizana fanampiana ny mpiara-belona :: Vao mainka mitodika amin’ny asa soa ity lehilahy namoy vady aman-janaka • AoRaha
Fanohizana fanampiana ny mpiara-belona Vao mainka mitodika amin’ny asa soa ity lehilahy namoy vady aman-janaka
Tao anatin’ny fotoana fohy no namoizan- dRalambomanana Tahiry ny vadiny sy ny zanany vavy vokatry ny fihotsahan’ny vato be teny Tsimialonjafy sy Ambanin’ampamarinana, tamin’ny alin’ny sabotsy 19 janoary lasa teo. Fifindrana monina vonjimaika tamin’ny tranon’ny ray aman-dreniny, teny Tsimialonjafy, no nahatonga azy ho tra-boina sy nandaozan’ireo tena akaiky azy indrindra tamin’io alina io, fa tsy mponina eny akory izy telo mianaka. Mbola niara-nisakafo antoandro izy mianakavy izay sady fiarahana farany, kinanjo nitranga ny loza tsy nanam-paharoa nony alina. Na izany aza, manohy ny asa sosialin’ny fikambanana niaraka natsangan’izy mivady ity raim-pianakaviana ity.
Andro nanjombona sy nangidy teo amin’ny fiainan-dRalambomanana Tahiry ny sabotsy 19 janoary 2019. Nihotsahan’ny ranon-tany sy ny vatobe mantsy ny tranon’ny ray aman-drenin’i Hery Soatsiferana Maryola, vadiny, sy ny zanany vavikely, teny Tsimialonjafy. Namoy ny ainy vokatr’izany loza izany izy mianaka ireo. Tsy mponina eny amin’ity toerana nisehoan’ny fihotsahan’ny tany ity telo mianaka fa sendra nandalo no tsy tafody teny amin’ny tranon’izy ireo teny 67 Ha.
Nanadio ny trano sy nanosotra savoka Ralambomanana Tahiry, ny sabotsy 19 janoary, maraina. Nisakafo antoandro teny 67 Ha izy mivady rafozany sy ny vady aman-janak’ity raim-pianakaviana. Nambarany fa efa nanakana ny vady aman-janany tsy handeha intsony ny lehilahy kanefa ny fitafian’izy mianaka sy ny tavoahangy fasiana ronono ho an’ny zanany no mbola tavela teny Tsimialonjafy. “Tahaka izay sy ny tsy misy mitovy ihany. Izay rahateo ny lahatra sy anjara dia ekena”, hoy ity raim-pianakaviana, nisento lalina.
Nanahirana ny famonjena an’ireo fianakaviana lasibatra tamin’ity voina tamin’ny volana janoary ity noho ireo tariby mpitondra herinaratra nianjera tamin’ny tany sady ny andro alina rahateo. “Tsy nilaza mazava ny tena zava-nisy marina ireo fianakaviako. Noheveriko ho faharavana kely ka tsy nahataitra ahy. Tonga teny aho vao nivarahontsana raha nahita fa lasa tany malalaka be ny tanàna. Nisy tondro hitako no nahatonga azy mianaka ho hita voalohany. Efa andro maromaro taty aoriana vao hita ny rafozako mivady”, hoy Ralambomanana Tahiry, mahatsiaro ny zavatra niainany sy ny fihetsika nataony, nandritran’ny famonjena.
Na mafy aza ny fahoriana nihatra taminy, miezaka ny miarin-doha hatra ny lehilahy. Anisan’ny tohizany foana, ohatra, ny asa soa niarahany tamin’ny vadiny rehefa nanangana fikambanana izy roa.
Vina tsy maty momoka
Nanangana fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana tokoa Ralambomanana Tahiry mivady. Ny fanampiana ireo sahirana ara-pivelomana eny amin’ ny fokontany 67 Ha sy ny manodidina no vinan’izy mivady. Ny haka mari-pahaizana “Doctorat” amin’ny taranja sosiolojia vaohijanona tamin’ny fianarana no fikasan’i Hery Soatsiferana Maryola. Tsy tanteraka ny faniriany.
“Zavatra mahafinaritra anay mivady ny manampy olona nandritra ny sivy taona. Rehefa vita soa aman-tsara ny fianarany, nieritreritra ny hiondrana any ampitan-dranomasina tamin’ny fianarana. Tsy tanteraka hatramin’ny farany ilay nofinofiny”, hoy Ralambomanana Tahiry, miezaka ny hitraka hatrany.
Tamin’ny alahady 20 janoary no tokony ho nizara fanomezana ny fikambanana saingy nipoitra iny loza naharava ny fianakaviana kelin’i Tahiry iny. Tsy nijanona teo anefa izy sy ny fahazaran’ izy mivady. “Ho fanohizako ny vinanay mivady no nizaràna arendrina ho an’ireo zanaky ny sahirana teny 67 Ha sy manodidina tamin’ny alahady 23 jona ho avy izao. Fanampiana avy amin’ny malala- tanana sy olom-pantatra no nahafahanay nanao an’izany hetsika izany”, araka fampahafantaran’ity raim-pianakaviana.
Taorian’ny voina tamin’ny volana janoary lasa teo dia miezaka manary dia Ralambomanana Tahiry. Misy ny fiaraha-mivavaka eo amin’ireo namana any an-tranony avy isaky ny amin’ny 7 ora alina. “Raha amin’ny maha olombelona, tsy mora izany hoe maty ny vady noeritreretina hiaraka hamakivaky ny fiainana sy ny menaky ny aina sady vavikely. Mila manankim-po amin’Ilay Nahary”, hoy izy.
Tsy nikely soroka tokoa mantsy i Hery Soatsiferana Maryola, fony fahavelony, tamin’ny fanetsiketsehana ny fikambanana niara-naorin’izy mivady. “Tsy havelako ho raraka an-tany ny zavatra nimatimatesany. Nahasarotiny azy ny maha-Malagasy ka izany no anisan’ny hizaranay arendrina. Haverina ny hasin’ny fankalazana ny fetin’ny Fahaleovantena tena malaasy fa tsy ho takon’ireto zavatra entin’ny vahiny ireo fotsiny”, hoy hatrany i Tahiry.
Nampiany fa: “isaky ny 19 amin’ny volana itsahana no mahatsiaro ny vady aman-janako foana izy. Fa ny saika tsy tantiko dia tamin’ny alahady 2 jona, lasa teo satria feno herintaona tamin’io ny nanaovana ny mariazinay. Mafy tamiko ny nanala an’ilay tontolon’ny andro alahady ”, hoy hatrany ity raim-pianakaviana mbola tanora kanefa lasa mananotena tsy fidiny.
Nolazainy fa tena manampy azy hiady amin’ny fahakiviana ny asa sosialy sy fanomezana tan-tsoroka an’ireo mpiara-belona. Tsy ny manome zavatra ihany no iantsorohan’ny fikambanana entiny fa hatramin’ny fanamboarana fotodrafitrasa sy ny asa fanadiovana ihany koa, toy ny etsy 67Ha Avaratra Atsinanana.
Fanendrena governora Milaza ho tsy afaka mitsikera fanapahan-kevitra politika ny HCC
Fiomanana amin’ny fifidianana Nitsidika ny Boriborintany fahenina Andriantsitohaina Naina
Fanadinam-panjakana Hivaly amin’ny 19 oktobra ho avy izao ny Bakalôrea
Lesoka tamin’ny fifidianana :: Dimy amby efapolo sy eninjato ireo fitoriana tonga etsy amin’ny HCC
Fanamorana ny fitsaboana :: Ho maimaim-poana ny fitaovana vaovao fanadiovana voa